နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ – Ministry of Foreign Affairs
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Manjurul Karim Khan အား ၉-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ (၁၂၀၀)နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(ရန်ကုန်)၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ကျေးရွာအလိုက် စိစစ်ပေးပို့ထားသော မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်ပြီးသူ (၃,၄၅၀)ဦးအား ပထမအသုတ်တွင် ဦးစားပေးစေလွှတ်မည်ဆိုပါက မြန်မာဘက်မှ လက်ခံရန်အသင့်ရှိကြောင်း၊ အခြားစာရင်းများမှ စိစစ်ပြီးသူများကို ပေးပို့မည်ဆိုပါက သံတမန်လမ်းကြောင်းမှ ပေးပို့သင့်ကြောင်းနှင့် ယင်းစာရင်း လက်ခံရရှိသည့်နေ့ရက်မှ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီးအား ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောတူညီ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် Physical Arrangement နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး ထပ်လောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်သည် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် (ICOE) ၊ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့၏ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း သွားရောက်ရန် ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ICOE အဖွဲ့ဝင်နှင့် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mr. Kenzo Oshima ထံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် Mr. Md. Shahidul Haque ထံသို့ လိပ်မူပေးပို့သည့် စာမူရင်းအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီးထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။